PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-08-27 - Abazi lutho ngenyanga yabo
Abazi lutho ngenyanga yabo
Isolezwe ngeSonto - 2017-08-27 - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU
NJENGOBA isisongwa inyanga yabesifazane kwabaningi kusaduma upotiyane uma kukhulunywa ngayo, ngenxa yokungaqondi ukuthi isho ukuthini.
Isolezwe ngeSonto lihambele eZwelibomvu okuyindawo yasemakhaya engaphandle kwasePinetown, ukuyoxoxisana nabesifazane bakule ndawo. Inhloso bekuwukuzwa uvo lwabo ngale nyanga, nokuthi bayayiqonda yini ukuthi isho ukuthini.
Yize bekhona abathe bake balugubhe uSuku Lwabesifazane oluba ngo-Agasti 9, kodwa okuqaphelekile ukuthi abaqondi ukuthi yinyanga yabo le, nokuthi isho ukuthini kubona njengomama. Abanye abazi nokuthi kukhulunywa ngani uma ubabuza ngayo.
UNksz Benzeni Magcaba (63) wasesigodini oKhozini uthe: “Kusuke kwenzekani ngayo? Noma mhlambe ukhuluma ngalesi sikhathi okuthiwa omama abawathinti amabhodwe, baphekelwa ngobaba? Angazi lutho ngeNyanga Yabesifazane. Iyiphi yona le nyanga okhuluma ngayo?”
UNkk Florence Mtolo (61) uthe: “Ngike ngizwe kuthiwa kuneNyanga Yabesifazane, kodwa angikaze ngifune nokwazi ukuthi iyiphi.”
UNkk Senzeni Nene (60) uthe uke ezwe ngezingane zakhe ngoSuku Lomama, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi zimthengele isipho ngalo. “Angazi noma seludlulile noma luseza yini lolo suku, ngoba angazi ukuthi lukuyiphi inyanga.”
Omunye okuvelile ukuthi akazi lutho ngeNyanga Yabesifazane, kodwa wazishaya umuntu oyaziyo nguNkk Zanele Khwela (49) wakule ndawo. Ngesikhathi ebuzwa ngeNyanga Yabesifazane ukuthi iyiphi nokuthi isho ukuthini kuyena, uvele wafa yinsini, wenza sengathi kukhulunywa ngento ayaziyo futhi ayijwayele. Ngesikhathi ebona ukuthi kulindwe impendulo kuyena, ubuze komunye wesifazane osemncane abehamba naye. NoSuku Lomama uluzwe ngaye lo wesifazane abehamba naye, wase ezishaya umuntu obevele elwazi, kodwa obesekhohliwe ukuthi lunini. “Ngiyalujabulela uSuku Lomama ngoba izingane zami zingiphatha kahle ngalo. Zijwayele ukungithengela izipho zingigeze, ziphinde zingithengele nezimpahla ezintsha zokulala. Kulo nyaka angilugubhanga. Ngicabanga ukuthi zikwenza lokhu uma kuqondane nokuthi lufike zinemali yokungithengela izipho. Angikhohlwa ukuthi kunalolu suku,” kusho uNkk Khwela ehleka.
UNksz Phumzile Mkhize (45) nguye oyiqondayo le nyanga. Ebuzwa ngayo uthe: “Ibalulekile kithina njengomama le nyanga ngoba yisona sikhathi okuqhakanjiswa ngaso ukubaluleka kwethu njengembokodo. Ngisho noSuku Lomama u-Agasti 9 angikhohlwa yilona. Ukugubha le nyanga sivamise ukuthi sihlangane ebandleni singomama, sibe nenkonzo, siphane izipho.”
NKK ZANELE KHWELA
NKSZ PHUMZILE MKHIZE
NKK SENZENI NENE
NKK FLORENCE MTOLO
NKSZ BENZENI MAGCABA